Yenza lesikahle akulula, ikakhulukazi imakethe eminyene izithombe ezehlukene digital. Okwamanje, umakhi ngayinye okunhlobonhlobo onobuhle, elibuye inkimbinkimbi inqubo yokuthenga. Yingakho umbuzo kanjani ukukhetha ikhamera, kubaluleke kangaka. Kunzima ukunikeza impendulo ocacile ngokuthi uholwe ezidingweni zomunye umsebenzisi ngamunye. Ngaphambi kokuthi ngikutshele ukuthi kanjani ukukhetha ikhamera, kumele ichaze imisebenzi eyokuma phambi kwakhe.
Uma sikhuluma ukuthenga Ikhamera izithombe amateur, kungenzeka ukumisa ukhetho isidlo insipho lula ukuphatha, futhi ukuze isetshenziswe lochwepheshe kuyadingeka ukuze uthole ikhamera ifakwe lens esikhiphekayo.
Indlela ukukhetha ikhamera ezinhle
Iningi bezithombe imfundamakhwela, sifisa ukuba babe ochwepheshe, walahlekelwa ngokuchichima onobuhle anikezwa abakhiqizi. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi izinga lezithombe kuncike. Kuyaziwa ukuthi owaziwayo yokukhanya kwikhamera enkulu. Amapharamitha kanye nekhwalithi lens kubalulekile ukuze izindleko zawo ngokuvamile kuze kube u-60% intengo lonke kulandzelana nekuhlunga tinsita. Lenses kungaba zahlukahlukene kakhulu, ngakho kuwufanele ukuhlola okukhethwa kukho njengoba nalezo ezisetshenziselwa sakubona kukuhle yakho onobuhle. Uma sikhuluma kanjani ukukhetha ikhamera, kuyafaneleka ukuthi ekugcineni kuzoba ukukhetha kwelensi efanelekayo.
Kuvele ipharamitha okubalulekile ubude ebalulekile. Ephambi kwezinduna iningi onobuhle yesimanje zoom Awukwazi ukusho ukuthi kuzoba anele imisebenzi okhokhelwayo. Ukukhuluma ngendlela ukukhetha ikhamera ngenhloso professional, kufanele kuphawulwe ukuthi kungcono makudle onobuhle abanamalensi nezilandiso. Lokhu kuzokwenza kakhulu ukwandisa amakhono imishini yakho. Ngaphambi kokuba unqume ukuthenga, kubalulekile ukuze ufunde kabanzi mayelana imodeli umkhiqizi ithandiwe. Qaphela: amafemu amaningi SLR amakhamera zenziwa ukuze lens ofanele kubo kuphela ukukhiqizwa yabo.
Uma sikhuluma kanjani ukukhetha ikhamera, kuyafaneleka ukuthi ebalulekile Kulokhu kukhona imingcele eminingi lobuchwepheshe. Kubalulekile ngempela ukwazi uhlobo-matrix ikhamera. It is icala umsebenzi uguqule isiginali ye-analog zibe isithombe sokugcina digital. Uhlobo kusitholi sokubonwayo incike induduzo kanye nekhwalithi ukuphathwa. Cishe zonke amakhamera yesimanje anemisila ikubonisa LCD. Ukukhetha idayagonali ezifanele ngokuphelele kuze kuwe.
Lapho uthenga ikhamera, okuyinto okunzima ngempela ukuba ukhethe, kubalulekile ukuba banake futhi yobukhulu bayo, isisindo, kalula zokusebenzela nenduduzo ngaphezulu izandla. Enye ipharamitha okubalulekile kanjani it ifakwe imemori khadi, kanye zisetshenziswa abanye okuyinto bafakela izakhi.
Lapho qikelela ukuthi zonke nemingcele ngenhla, ungakhetha imodeli enkulu ngempela oluzosiza iminyaka ukuba uze, ujabula isibhamu.
Umshini wokuwasha Bosch WLG 20260 OE: Ukucaciswa, ukuqhathanisa nesincintisana kanye nokubuyekeza